कार्य सामना avtokonstruktorami माहौल प्रवेश तिनीहरूलाई बहिष्कार गर्न हाइड्रोकार्बन vapors retarding उपकरण प्रदान गर्न अघि, पर्यावरण स्तर "यूरो 3" बैठक वाहन को सी आगमन। यसरी, मा ईंन्धन प्रणाली घरेलू सहित धेरै मिसिन, को, adsorber देखा पर्न थाले। यो के हो र यो भाग कसरी काम गर्छ? यी प्रश्नहरूको जवाफ यस लेखमा सिक्नेछौं।
कहाँ स्थित छ?
adsorber जस्ता विवरण, कालो धेरै सेन्टिमिटर एउटा सानो जार उचाइ प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो इन्जिन कक्ष को सही पक्षमा हावा सेवन अन्तर्गत लगभग सबै कार मा स्थापित छ।
सोखना को विशेषताहरु
किन adsorber लागि आवश्यकता? सामान्य मा, सोखना - तरल वा ठोस एउटा ग्याँस अवशोषण प्रक्रिया। यस मामला मा, आधारभूत तत्व "माथि soaks" ईंन्धन प्रणाली को एक जोडी, कोइला कार्य गर्दछ। तिनीहरूले भरिएको थियो र उपकरण को एक भाग।
Adsorber - यो के हो? दृश्य विशेषता
शब्द अंग्रेजी अनुवाद "adsorber" "अवशोषित", "अवशोषित गर्न" हो। डिजाइन, यो वस्तु एक ऊर्जा-अवशोषित प्लेट छ। यो Polymeric सामाग्री को एक विशेष फिलर छ भित्र - बाह्य, हामी तुरुन्तै बम्पर डाली गर्दैन निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ।
यो उपकरण भाग (बम्पर) प्राथमिक छलफल र त्यसपछि बाह्य वातावरणमा dissipated छ जो गर्मी मा यांत्रिक ऊर्जा धर्मान्तरित छ। को adsorber मा स्थित छ जो प्लेट, मा, एक ठूलो जिम्मेवारी, त्यसैले धेरै निर्माताहरु यस्तो सख्त आवश्यकताहरु यसको प्राविधिक विशेषताहरु र सारा रूपमा सम्पूर्ण एकाइ को गुणहरू आयातित।
आधारभूत भौतिक यो तत्व को निर्माण मा प्रयोग गरिन्छ जो - सेलुलर प्लास्टिक वा छ foamed polystyrene। हालैका वर्षहरूमा निर्माताहरु थप ग्लास मोती प्रयोग गर्न थाले। यो धेरै मान्छे को स्वास्थ्य असर किनभने सामाग्री को धेरै गुण पनि कडाई, नियन्त्रित छ। यस कारण लागि, adsorber (तल हेर्न सक्नुहुन्छ उपकरणको फोटो) एक उच्च गुणस्तरीय Bumpers संग पूरा भएको छ।
तर मात्र होइन मान्छे को सुरक्षा र स्वास्थ्य मा निर्भर गर्दछ। एक कार VAZ "Kalina" adsorber कुशलतापूर्वक आफ्नो कार्य गर्न, तपाईं शून्य पछिल्लो बम्पर क्षति को जोखिम कम गर्न आवश्यक छ। यो विस्तार एक शक्ति तत्व छ, र त्यो, जो यांत्रिक क्षति हुन सक्छ "एक झटका राख्छ" भनेर। र उपकरण भङ्ग वा punctured एक छ भने उसलाई अब सञ्चालन गर्न अनुमति दिन। त्यो हो हरेक स्ट्रोक adsorber (2110 औं Wha 'र सहित) संग उत्सर्जन अवशोषित आफ्नो क्षमता हराउछ किनभने।
Adsorber - यो के हो? डिजाइन बारेमा
यो भाग धेरै संरचनात्मक तत्वहरू हुन्छन्:
अगाडि बाफ वाहिनी ट्यूब।
इन्धन वाष्प विभाजक र नाली ट्यूब।
टयूबिंग र डिब्बा पर्ज वाल्व।
को सोखना निम्न अल्गोरिदम कदम। इन्धन vapors (पेट्रोल), ट्यांक, यसको गुण गठन र कारण पहिलो विभाजक प्रविष्ट कुनै पनि कन्टेनर घाँटी को कमी गर्न माथिको उठ्नेछ जुन। त्यहाँ एक संक्षेपण प्रक्रिया हुन्छ। त्यो हो, जोडी एक पटक फेरि ट्यांक फिर्ता एक तरल र नालियों परिणत। समय थियो छैन जो कि भाग, एक तरल मा एक महामण्डल पदार्थ देखि कायापलट गर्न adsorber नै प्रवेश गर्छ। यहाँ यी अतिरिक्त प्रणाली सक्रिय कार्बन प्रयोग अवशोषित।
यो इन्जिन बन्द हुँदा यो प्रक्रिया मात्र हुन्छ कि टिप्पण लायक छ। अन्यथा, प्रणाली Solenoid डिब्बा हावा बाहिर रगत खुल्नेछ। यस मामला मा, ट्यांक गठन र तरल बन्न समय छैन जो सबै पेट्रोल वाफ, को सेवन पाइप आन्तरिक दहन इन्जिन द्वारा Blown र जलाए।
सञ्चालनको यो सिद्धान्त मार्फत एक adsorber प्रयोग गर्न धेरै लाभ उल्लेख गर्न सकिन्छ:
वातावरण हानिकारक vapors द्वारा दूषित छैन।
कार (1 भन्दा कम प्रतिशत albeit, तर अझै पनि वास्तवमा रहन्छ - कुनै जलेको मोटर पेट्रोल वाष्प थप इन्धन खपत हुनेछ) कम इन्धन खपत गर्नेछ।
सम्पत्ति clog र adsorber जस्ता विवरणहरू गर्न बेकारी निहित हुन्छन्। उपकरणको इनकार मात्र किनभने यांत्रिक क्षति को एक परिणाम रूपमा खडा जो प्वालहरू, को हुन सक्छ, तर पनि कारण अवशोषण तत्व सामान्य वेयर (दूषण) गर्न। यो भाग को लक्षण एक रूपमा सेवा गर्न सक्नुहुन्छ सकारात्मक दबाब ट्यांक मा। यो कारणले गर्दा ठूलो प्रणाली बाट जान कतै छ जो, वाष्प को राशि को संग्रह हुन्छ। यी formations उपस्थिति लागि वाहन जाँच एकदम सरल छ - तपाईं मात्र ग्याँस ट्यांक खोल्न आवश्यक, र यो सुन्न। तपाईं एक फुफकार सुने भने, त्यसपछि पोत हानिकारक वाष्प वातावरण धेरै संचित छ।
तपाईं अर्को तरिकामा समस्या पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, 60 डिग्री भन्दा एक तापमान गर्न इन्जिन माथि वार्मिंग पछि सेल्सियस एकदम वाहन निस्क्रियगर्दै गति गिर गर्न थाल्छन्। मिसिन को आन्दोलन अचानक कुनै स्पष्ट कारण लागि मर्न सक्छ।
यी लक्षणहरू आफ्नो कार संग उत्पन्न भने, adsorber जाँच गर्न निश्चित हुन। को धेरै गुना गर्न वाल्व देखि चल्छ कि नली विच्छेद गर्न, र केही दिनको लागि यो muffle गर्न - यो त्यसो गर्न सम्भव छ। यदि लक्षण गायब गरेका छैनन्, र कार अझै पनि पालैपालो संग "freaks" दिन्छ, त्यसपछि, सम्भवत, को adsorber भरिएको छ।
निस्सन्देह, उपकरण मिसिन रूपमा अघि जाने भरा, तर यो निष्क्रिय "अस्थायी" हुनेछ। तर, यो भने समय यो समस्या ठीक कि गर्दैन, वा कम से कम एक ग्याँस स्टेशन ट्यांक टोपी बस मुखबाट "गोली" मा, जलाशय गठन डाटा देखि समय समयमा जारी गर्न, र खोल्न हुन सक्छ उल्लेख गर्नुपर्छ। कहाँ पतन, कुनै एक होइन भविष्यवाणी गर्न सक्षम हुनेछ। अझ यति यो लायक धेरै छ, नयाँ यो वस्तु परिवर्तन गर्न सजिलो - कुनै पनि मामला मा, प्रत्येक समय अनधिकृत "शट" को लागि उनको डर कवर सम्म आ बस अव्यावहारिक छ।
म डिब्बा कसरी प्रतिस्थापन गर्न सक्छ?
यो वस्तु परिवर्तन सेवा केन्द्र वा आफ्नै उही हुन सक्छन्। तर यहाँ काम को राशि निकै ठूलो र जटिल छैन, किनभने यो उपकरण स्थापना (समय को 15-20 मिनेट खर्च हुनेछ डिब्बा बस विस्थापन गर्न) आफ्नै हात गर्न एकदम सम्भव छ। तल हामी कसरी घर मा यो वस्तु विस्थापन गर्न थप विवरण तपाईं भन्नेछु।
पहिलो हामी नयाँ डिब्बा, उहाँलाई लागि रबर नली धेरै Clamps, बोल्ट र engravers को 100 सेन्टिमिटर तयार गर्न आवश्यक छ। यो नली तेल र पेट्रोल प्रतिरोध र डिब्बा पर्ज वाल्व जस्ता विवरण संग सुसज्जित हुनुपर्छ भन्ने टिप्पण लायक छ।
का भागहरु को समाप्तिन्यू सुरु गरौँ। पहिलो, तिमी उसलाई फास्टनरों देखि राहत पर्छ, र त्यसपछि यो एक नली विच्छेद कि भल्ब गर्न पेट्रोल vapors र तार ब्लक को आपूर्ति। थप bleeder वाल्व dismantled। विच्छेद र विभाजक को आउटलेट देखि इन्धन नली। वोल्ट नट आदि खोल्नु र कोष्ठ हटाउन। यो सबै तीन बोल्ट मा निश्चित छ किनभने यो सजिलो बनाउन।
यो चरण मा, adsorber सफलतापूर्वक हटाइएको थियो। अब तपाईं एक नयाँ उपकरण स्थापना गर्न तयार छन्। रबर नली को सबैभन्दा लामो लम्बाइ पाइप, को downy च्यानलमा इन्धन vapors प्रवाह संलग्न छ। सानो छ जो नली, को भाग, को विभाजक देखि एक पाइप बार संलग्न छ। कि पछि, हामी डाँडाको skewer। अब वाष्प च्यानल हटाउन गर्न नली जडान गर्नुहोस्। मोटर कवर मा अन्तिम स्थापित छ। यो तार र पैड संग जोडिएको छ। को पर्ज वाल्व र adsorber लामो नली बीच स्थापित हुनुपर्छ। सम्झना सबै रबर ट्यूब इन्जिन तेल र पेट्रोल को प्रभाव को प्रतिरोधी हुनुपर्छ। एक ट्यूब संग पुरानो नली चेक वाल्व हटाइएको छ। यसको ठाउँमा विवरण को एक छोटो खण्ड स्थापित। यो चरण adsorber मा सबै सफलतापूर्वक स्थापित। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, यो उपकरण को स्थापना व्यवसायीक को मद्दत बिना गर्न सकिन्छ।
"Priora" - अन्तमा, हामी धेरै कार मालिक एक जवान मोडेल को दशौं परिवार VAZ अवशोषक मा स्थापित याद गर्नुहोस्।
आफ्नै हात संग वाल्व को निदान
तपाईं एक वाल्व डिब्बा प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक छ भने, त्यसपछि पनि थप त तपाईं सेवा स्टेशन जान अर्थमा नगर्नुहोस्। स्थापना गर्न यसको विपरीत, यो काम समय केही मिनेट र केवल एक फिलिप्स पेचकस तपाईंबाट आवश्यक हुनेछ। यस्तो यन्त्र फेला पार्न गाह्रो छैन, र यो मात्र 500-600 rubles लागत। खैर, त्यहाँ एक फिलिप्स पेचकस घरमा प्रत्येक छ। को वाल्व संग परिवर्तन गर्न सकिन्छ र adsorber सेन्सर किनभने यो सीधा पहिलो सदस्य नियन्त्रण गर्दछ। तर, यो सेन्सर खुर को रूप मा अन्य ध्वनि उत्पादन गर्दा मात्र गर्नुपर्छ।
पहिलो prodiagnostiruem वाल्व उपयोगिता। यो भाग परीक्षण गर्न, हामी एक मल्टीमीटर र तार केही लम्बाईहरू आवश्यक हुनेछ।
पहिलो retainer जारी र कनेक्टर दोहन पर्ज वाल्व निकाल्न। अर्को, "वजन" गर्न वाल्टमीटर को नकारात्मक नेतृत्व जडान गर्नुहोस्। ज्वलन मा, तार को "एक" ब्लक मा भोल्टेज मापन।
परिणाम वोल्ट कम्तिमा 12 हुनुपर्छ। भोल्टेज वर्तमान छैन भने, वा सामान्य भन्दा कम छ, सम्भवत तपाईँले ब्याट्री वा खराब ECU समाप्त गरेका छन्।
एक फिलिप्स को वाल्व गर्न बन्धन को ट्यूब कलर कमजोर पेचकस प्रयोग गरेर। हामी पाइप देखि नली बाहिर। एक पेचकस संग Prying, को डिब्बा देखि वाल्व हटाउन। निष्कर्ष मा ब्याट्री 12 देखि भोल्टेज (प्लस टर्मिनल "एक", माइनस "बी") प्रदान गर्नुहोस्।
को वाल्व यो खिच्छ भनेर पछि खोल्न गर्दैन भने, यन्त्र प्रतिस्थापित हुनुपर्छ। खैर, कुनै नयाँ तत्व हे-घन्टी छ भने, यो पुरानो भागबाट उधारो गर्न सक्नुहुन्छ। तर, यो अनुज्ञेय मात्र घन्टी कुनै पनि यांत्रिक क्षति र microcracks छैन कि proviso अन्तर्गत छ। अन्यथा वस्तु सील पनि बदलिएको हुनुपर्छ।
को वाल्व कसरी परिवर्तन गर्ने?
अब तपाईं जान तयार छौं। तपाईं पहिलो छ, कार विच्छेद गर्नुपर्छ, ब्याट्रि को नकारात्मक टर्मिनल हटाउन। अर्को, यो सीपीए देखि प्लग विच्छेद।
यो गर्न, एक सानो भएको उपखाडी कलर liberating यो भाग प्राप्त गर्न। यसलाई देखि हटाउने पछि हावा प्रवाह सेन्सर, अलग लिएको। अब, आफैलाई DMRV गोली छैन ताकि, अलिकति तल वाल्व बारी आफ्नो चिल्लो समाप्तिन्यू लागि माउन्ट। फिर्ता लिने संलग्न लगभग 1 सेन्टिमिटरले छ।
त्यसपछि तपाईं grooves यसलाई पुल गर्न आवश्यक छ। त्यसैले यो टुक्रा धेरै बस हटाइएको छ। तर डिब्बा वाल्व अझै dismantled छैन। अर्को हामी प्रत्येक पक्षमा नेतृत्व फिटिंग केही विच्छेद गर्न आवश्यक हुनेछ। तिनीहरूलाई को एक, एकदम बस हटाइएको छ र दोस्रो समस्या हुन सक्छ। को उपखाडी उपयुक्त विशेष छेस्कनी निश्चित छ भन्ने तथ्यलाई। यसलाई हटाउन, तपाईं लक डुबा र प्लास्टिक जुङ्गा pry गर्न आवश्यक (निपल अलिकति उकालो उठाएर छ)।
यो चरण मा, डिब्बा वाल्व सफलतापूर्वक हटाइएको छ। उल्टो क्रममा नयाँ स्थापना।
Adsorber - यो उपकरण के छ? यस लेखमा तपाईं कार यो तत्व, साथै केही संरचनात्मक तत्वहरू यसलाई बनेको छ कसरी महत्त्वपूर्ण सिके। Adsorber सीधा उत्प्रेरक संचार भनेर यस्तो तरिकाले प्रबन्ध छ। र गर्दा मिसिन warms, यो पेट्रोल vapors ईंन्धन ट्यांक तिनीहरूले मा भित्र पस्नु भनेर छैन सङ्कलन निकास धेरै गुना (चिसो कार उत्प्रेरक मा vapors को प्रवेश खराब छ)। र तपाईंले सोच छ भने, तपाईं एक कार adsorber, हामी तपाईंलाई प्रतिक्रिया आवश्यक वा निम्न: तपाईँले यो यन्त्र बिना तपाईं प्राविधिक को वातावरण र पर्यावरण स्तर चिन्ता छ छैन भन्ने प्रदान सार्न सुरक्षित जारी (पाठ्यक्रम गर्न सक्ने एक उत्प्रेरक छैन भने निरीक्षण)।
त्यहाँ एक डिब्बा VAZ छ, र कसरी यसलाई विस्थापन गर्न किन यति, हामी बाहिर फेला परेन। कृपया याद गर्नुहोस् कि यो वस्तु पर्यावरण "यूरो 3" मानक, र थप कारहरुको लागि महत्वपूर्ण हुन्छ। हानिकारक vapors को तत्व एकाग्रता को अभाव एकदम वृद्धि गरिनेछ, तदनुसार, पारिस्थितिकी "यूरो 3" गर्न "यूरो 1" वा2कार को आफ्नो स्तर कम गर्नेछ।
कुरगान ट्रेलर "किल्ला": विशेषताहरु र लाभ
विशाल फोर्ड भ्रमण
"बीएमडब्ल्यू E60" - पाँचौं Bavarian "पाँच"
विरोधी-लक ब्रेक लगान सिस्टम
को घाटी के हो? संसारको सबै भन्दा प्रसिद्ध canyons
प्रकार र दुखाइ को विशेषताहरु
आंतहरू कसरी सफा गर्न र शरीरलाई हान्न नसक्ने।
तबला ज्योति। येशू ख्रीष्ट को रूप परिवर्तनको समयमा रहस्यमय प्रकाश
फिल्म "धनु बेचैन": अभिनेता र सुविधाहरू
कसरी खान र बोसो प्राप्त? मान्छे किन बोसो प्राप्त गर्छन्? उचित पोषण
को ब्यूटिशियन मा अनुहार सफाई
एक सफल व्यक्तिको दैनिक तालिका: एक उदाहरण। समय कसरी व्यवस्थापन गर्ने?
माइक होटल पटाया 3: * होटल को वर्णन, यात्री समीक्षा